မိုဗစ္၊ဒြိဳက္ေယာ့ခ္၊ဗန္ပါစီတို႔လို မန္ယူနဲ႔ တာထြက္ေကာငး္ခဲ့တဲ့ ဒန္နီရယ္ဂ်ိမ္းစ္ |
ေဆာက္သမ္တန္နဲ႔စေနညပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္က ဦးေဆာင္ဂိုးေၾကာင့္ ေတာင္ပံကစားသမားေလးဒန္နီရယ္ဂ်ိမ္းစ္ဟာ မန္ယူကစားသမားဘ၀ အစ ၄ ပြဲမွာတင္ ၃ ဂိုးသြငး္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မန္ယူကသာ ၃ ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ေနေပမယ့္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ အဲဒီေ၀းလ္ကစားသမားေလးကေတာ့ အသင္းသစ္မွာ တာထြက္ေကာင္းေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ္ေခတ္က မန္ယူနဲ႔တာထြက္ေကာင္းခဲ့သူေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ေခတ္မွာ မန္ယူနဲ႔အတူ တာထြက္ေကာင္းခဲ့တဲ့ တျခားကစားသမားေတြကို ဆက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္….
ဗန္ပါစီ(၃ ပြဲမွာ ၄ ဂိုး)
ဗန္ပါစီဟာ အာဆင္နယ္ကေန မန္ယူကိုေျပာင္းလာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ အုိးလ္ထရက္ဖုိ႔ဒ္ပရိသတ္ရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈကိုရရွိခဲ့တာပါ။ မန္ယူနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုးပြဲမွာ အဲဗာတန္ကို ရႈံးခဲ့ေပမယ့္ ဖူလ္ဟမ္ကို ၃-၂ နဲ႔ႏိုင္ေတာ့ ေျမမက်ဂိုးတစ္ဂိုးကန္သြင္းခဲ့ကာ အဲဒီရလဒ္နဲ႔ပဲ ေဆာက္သမ္တန္ကိုႏိုင္ခဲ့ေတာ့ ဟက္ထရစ္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗန္ပါစီဟာ အဲဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ၂၆ ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး မန္ယူနဲ႔ဗိုလ္စြဲခဲ့ပါတယ္။
ဆာဟာ(၄ ပြဲမွာ ၄ ဂိုး)
ရာသီတစ္၀က္တစ္ပ်က္မွာ ေျပာင္းလာၿပီး ခ်က္ခ်င္းေျခစြမ္းျပတဲ့ ရွားရွားပါပါးကစားသမားေတြထဲမွာ ဆာဟာလည္း တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ပါ။ ဖူလ္ဟမ္ကေျပာင္းလာတဲ့ အဲဒီျပင္သစ္သားတိုက္စစ္မႈးဟာ ေဆာက္သမ္တန္၊အဲဗာတန္တို႔ကိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ပဲြေတြမွာ အဖြင့္ဂိုးသြင္းခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲက အဲဗာတန္နဲ႔ပြဲမွာ ၂ ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ကာ အသင္းေဟာင္းနဲ႔ျပန္ေတြ႕ေတာ့လည္း ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မန္ယူကစားသမားဘ၀မွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ ၂ ႀကိမ္နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၁ ႀကိမ္ရခဲ့သူပါ။
အီဘရာဟီမုိဗစ္(၄ ပြဲမွာ ၄ ဂိုး)
မိုဗစ္ဟာ ၂၀၁၆ က သူ႔ရဲ႕မန္ယူပြဲဦးထြက္မွာပဲ ဘုန္းေမာက္ကို ၃-၁ နဲ႔ႏိုင္ေတာ့ အေ၀းကန္သြင္းခ်က္နဲ႔ ဂိုးရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အုိးလ္ထရက္ဖုိ႔ဒ္က ေဆာက္သမ္တန္နဲ႔ပြဲမွာလည္း ၂ ဂိုးသြင္းခဲ့ၿပီး ရႈံးနိမ့္ခဲ့တဲ့မန္ခ်က္စတာဒါဘီပြဲမွာေတာင္ ဂိုးသြင္းခဲ့ပါတယ္။ မုိဗစ္ဟာ မန္ယူကစားသမားဘ၀ ၄၆ ပြဲမွာ ၂၈ ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယူရိုပါလိဂ္နဲ႔အဂၤလန္လိဂ္ဖလားေအာင္ျမင္မႈရခဲ့တာပါ။
လူကာကူ(၄ ပြဲမွာ ၄ ဂိုး)
လူကာကူဟာ အုိးလ္ထရက္ဖုိ႔ဒ္မွာ အဆင္မေျပခဲ့ေပမယ့္ ၇၅ သန္းတန္အဲဒီဘယ္လ္ဂ်ီယံသားဟာ မန္ယူနဲ႔ တာထြက္လွခဲ့သူပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ္အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာ ၀က္စ္ဟမ္းကို ၄ ဂိုးျပတ္ႏိုင္ေတာ့ သူ ၂ ဂိုးသြင္းခဲ့ၿပီး ဆြမ္ဆီးကို အဲဒီရလဒ္နဲ႔ပဲထပ္ႏိုင္ေတာ့လည္း သူဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စတုတ္နဲ႔ ၂-၂ သေရက်တဲ့အေ၀းကြငး္ပြဲမွာလည္း သူဂိုးသြင္းခဲ့ေသးတယ္။
ဒြိဳက္ေယာ့ခ္(၄ ပြဲမွာ ၃ ဂိုး)
သမုိင္းထဲက ဖလား ၃ လုံးေအာင္ျမင္မႈရ မန္ယူရဲ႕သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႔ရဲ႕မန္ယူပြဲဦးထြက္မွာ ဂိုးမရွိသေရက်ခဲ့ေပမယ့္ ဆက္ကစားတဲ့ပြဲေတြထဲက ခ်ာလ္တန္နဲ႔ပြဲမွာ ၂ ဂိုးသြင္းခဲ့သလို ကိုဗင္ထရီကို ၂-၀ နဲ႔ႏိုင္တဲ့ပြဲမွာလည္း အဖြင့္ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
မာရွယ္နဲ႔ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္(၄ ပြဲမွာ ၃ ဂိုး)
မာရွယ္နဲ႔ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္ဟာ လက္ရွိမန္ယူတိုက္စစ္မွာ ေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေနေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္စလုံး မန္ယူနဲ႔တာထြက္ေကာင္းခဲ့တာပါ။ အဲဒီထဲမွာ ရက္ရွ္ဖုိ႔ဒ္ရဲ႕တာထြက္က ပိုအထင္ႀကီးစရာေကာင္းပါတယ္။ ဗန္ေဂါလ္ထက္ထက္ စတင္အခြင့္အေရးရတဲ့ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္ဟာ အာဆင္နယ္န႔ဲသူ႔ရဲ႕ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲဦးထြက္မွာပဲ ၂ ဂိုးသြင္းခဲ့ၿပီး ၄ ပြဲေျမာက္ျဖစ္တဲ့ မန္ခ်က္စတာဒါဘီပြဲစဥ္မွာ တစ္လုံးတည္းေသာအႏိုင္ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့တာပါ။
ဆောက်သမ်တန်နဲ့စနေညပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်က ဦးဆောင်ဂိုးကြောင့် တောင်ပံကစားသမားလေးဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ဟာ မန်ယူကစားသမားဘ၀ အစ ၄ ပွဲမှာတင် ၃ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူကသာ ၃ ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်နေပေမယ့် ၂၁ နှစ်အရွယ် အဲဒီဝေးလ်ကစားသမားလေးကတော့ အသင်းသစ်မှာ တာထွက်ကောင်းနေတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း သူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ခေတ်က မန်ယူနဲ့တာထွက်ကောင်းခဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ခေတ်မှာ မန်ယူနဲ့အတူ တာထွက်ကောင်းခဲ့တဲ့ တခြားကစားသမားတွေကို ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်….
ဗန်ပါစီ(၃ ပွဲမှာ ၄ ဂိုး)
ဗန်ပါစီဟာ အာဆင်နယ်ကနေ မန်ယူကိုပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ မန်ယူနဲ့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာ အဲဗာတန်ကို ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ဖူလ်ဟမ်ကို ၃-၂ နဲ့နိုင်တော့ မြေမကျဂိုးတစ်ဂိုးကန်သွင်းခဲ့ကာ အဲဒီရလဒ်နဲ့ပဲ ဆောက်သမ်တန်ကိုနိုင်ခဲ့တော့ ဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗန်ပါစီဟာ အဲဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၂၆ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး မန်ယူနဲ့ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
ဆာဟာ(၄ ပွဲမှာ ၄ ဂိုး)
ရာသီတစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာ ပြောင်းလာပြီး ချက်ချင်းခြေစွမ်းပြတဲ့ ရှားရှားပါပါးကစားသမားတွေထဲမှာ ဆာဟာလည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါ။ ဖူလ်ဟမ်ကပြောင်းလာတဲ့ အဲဒီပြင်သစ်သားတိုက်စစ်မှုးဟာ ဆောက်သမ်တန်၊အဲဗာတန်တို့ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာ အဖွင့်ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ကာ အသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့တော့လည်း ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူကစားသမားဘဝမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၂ ကြိမ်နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁ ကြိမ်ရခဲ့သူပါ။
အီဘရာဟီမိုဗစ်(၄ ပွဲမှာ ၄ ဂိုး)
မိုဗစ်ဟာ ၂၀၁၆ က သူ့ရဲ့မန်ယူပွဲဦးထွက်မှာပဲ ဘုန်းမောက်ကို ၃-၁ နဲ့နိုင်တော့ အဝေးကန်သွင်းချက်နဲ့ ဂိုးရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်က ဆောက်သမ်တန်နဲ့ပွဲမှာလည်း ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာတောင် ဂိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ မိုဗစ်ဟာ မန်ယူကစားသမားဘ၀ ၄၆ ပွဲမှာ ၂၈ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ယူရိုပါလိဂ်နဲ့အင်္ဂလန်လိဂ်ဖလားအောင်မြင်မှုရခဲ့တာပါ။
လူကာကူ(၄ ပွဲမှာ ၄ ဂိုး)
လူကာကူဟာ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ အဆင်မပြေခဲ့ပေမယ့် ၇၅ သန်းတန်အဲဒီဘယ်လ်ဂျီယံသားဟာ မန်ယူနဲ့ တာထွက်လှခဲ့သူပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဝက်စ်ဟမ်းကို ၄ ဂိုးပြတ်နိုင်တော့ သူ ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ဆွမ်ဆီးကို အဲဒီရလဒ်နဲ့ပဲထပ်နိုင်တော့လည်း သူဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စတုတ်နဲ့ ၂-၂ သရေကျတဲ့အဝေးကွင်းပွဲမှာလည်း သူဂိုးသွင်းခဲ့သေးတယ်။
ဒွိုက်ယော့ခ်(၄ ပွဲမှာ ၃ ဂိုး)
သမိုင်းထဲက ဖလား ၃ လုံးအောင်မြင်မှုရ မန်ယူရဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့မန်ယူပွဲဦးထွက်မှာ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပေမယ့် ဆက်ကစားတဲ့ပွဲတွေထဲက ချာလ်တန်နဲ့ပွဲမှာ ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့သလို ကိုဗင်ထရီကို ၂-၀ နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာလည်း အဖွင့်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မာရှယ်နဲ့ရက်ရှ်ဖို့ဒ်(၄ ပွဲမှာ ၃ ဂိုး)
မာရှယ်နဲ့ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ဟာ လက်ရှိမန်ယူတိုက်စစ်မှာ ဝေဖန်စရာဖြစ်နေပေမယ့် နှစ်ယောက်စလုံး မန်ယူနဲ့တာထွက်ကောင်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီထဲမှာ ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ရဲ့တာထွက်က ပိုအထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်။ ဗန်ဂေါလ်ထက်ထက် စတင်အခွင့်အရေးရတဲ့ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ဟာ အာဆင်နယ်နဲ့သူ့ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲဦးထွက်မှာပဲ ၂ ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ၄ ပွဲမြောက်ဖြစ်တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်မှာ တစ်လုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။